Sida loo Mirror Your Android Screen in PC la Chromecast | Mirror Chromecast
Sida jeer horumar, technology waa in tartan la oo qodobkan ku saabsan Chromecast kuu sheegi doonaa sida ay u shaqayso iyo sida ay qortay Daily Mirror aad screen Android inay PC la Chromecast. Chromecast waa technology aad u anfacaya iyo waxa ay noqon doontaa qayb weyn ka mid ah mustaqbalka. Si aad wax dheeraad ah oo ku saabsan Chromecast, Chromecasts lagu taliyey, iyo sida ay u shaqayso, continue reading this article wargelin ah.
Haddii aad leedahay aalad android iyo aad rabto in aad muraayad (share) shaashadda si aad PC, kani waxaa samayn karaa iyadoo la isticmaalayo tallaabooyinkan fudud qaar ka mid ah, laakiin taas loo sameeyo waxay ku xiran tahay qalabka android aad leedahay iyo ilaha aad u odoroso si doonaa , in TV ama PC. Chromecast ayaa lagula talinayaa in ay buugii aad screen android in aad PC waa la shubay, Koushik Dutta ayaa Mirror Timid qalabka android ugu ama lagala soo bixi karaa, oo loogu tala galay dadka isticmaala Custom ROMS, cyanogen Ducooyinkii 11 Screencast waxaa loo isticmaali karaa. Waa arrin aad u muhiim ah in PC in buugii doonaa shaashadda qalab android ayaa AllCast aqbalana lagu rakibay, sababtoo ah software tani waxay suurtogal ka dhan ah muuqaalada mirroring in in karti loo on dhamaadka helo.
1. Waa maxay Waxaa?
Chromecast waa nooc ka mid ah farsamada casriga ah ee la aasaasay oo mananged by Google, kaas oo awood u shaqsi ah in la odoroso ama bandhigay wax kasta oo ay leeyihiin ay screen qalab Android shaashadda sare ah sida PC ama TV. More xiiso Chromecast waa uun qalab yar kaas oo lagu rakibaa gelin karo ah dekedda kumbiyuutarada HDMI si aad u oggolaatid shubay fudud shaashad weyn. Awoodda waxaa lagu magacaabaa mirroring iyo waxa aad u baahay bulshada maanta. Chromecast waa mid aad u sahlan, sababtoo ah mararka qaar shakhsiyaadka aan la wareeriyay karaa a screen yar mobile haddii ay daawashada filim tusaale ahaan ka ciyaaro kulan ay jecel yihiin sida FIFA 2015. technology ee Chromecast waa suurto gal, maxaa yeelay app chrome u PC iyo mobile Android labadaba qalabka si ay taariikhda. Chromecast u ogolaanaya xooriddoodu tahay dhammaan howlaha aad jeceshahay mobile si toos ah u aad kumbiyuutarada shaashadda.
2. muuqaalada Chromecast
• Chromecast la shaqeeya aqlabiyad ah barnaamijyadooda - Ma jirto baahi ah in la walwalo codsiyada la heli karaa marka wax iibsigu Chromecast oo u fidinno. Waxay la shaqeeyaan tiro aad u badan oo ah barnaamijyadooda, in aad tahay ay doonayaan inay sii qulquli iyo muraayad si aad shaashadda weyn. Apps sida Netflix, HBO, Google Music, Youtube, IheartRadio, iyo Google Play si buuxda awood u mirroring in aad ka kaaftoomi PC lacag la'aan ah, maxaa yeelay waxa ay qaataan oo keliya xoogaa tallaabooyin kor u taagaysa.
• qurxiyaan xitaa marka aadan ku ridaya - Haddii qalab aad waa in ay joojiyaan ridaya muddo dhowr miridh ah ama aad rabto in aad maqli music qaar ka mid ah oo aad nasato. Waxaad sidaas samayn kartaa qaab ganaax sababtoo ah Chromecast ayaa feature ah oo u oggolaan kara asalka oo idil ah aad PC in la lagu wadaa in images satellite, arts qurux badan ama sawiro shakhsi ka maktabadda qaab hortegi lahaa, taasoo la micno ah in soo jeeda oo dhan eegi doonaa hodan iyo qurux badan oo leh wax kasta oo aad u doorato in aad noqon.
• Helitaanka - Chromecast ayaa diyaar u ah qof kasta sida ay horay u socon la boqolaal qalabka android in shaqsiyaad hore u leedahay iyo sida loo isticmaalo maalin kasta.
• jaban - Kharashka in la isticmaalo Chromecast waa $ 35 oo kaliya kaas oo waa mid aad u badan oo la awoodi karo iyo dhaqaale ee bulshada maanta. Marka aad iibsato qalabka waa taada ee Meyeydaan.
• fududaato helitaanka iyo Mudanayaasha - Chromecast waa fududahay in la isticmaalo, oo aad u baahan tahay inaad samayso waa fur iyo ciyaaro si ay ugu raaxaystaan ​​muuqaalada ay dad badan.
• update Auto - Chromecast si toos ah u cusboonaysiisay si aad u yeelan karaan Chine iyo sifooyinka lihin oo la heli karo iyada oo aan dadaal ama ka kaaftoomi cusub.
3. Tallaabooyinka ku saabsan sida ay qortay The Mirror
Download iyo Mudanayaasha Chromecast labada qalabka dukaanka play ah, dukaanka play waa app ah qalabka android aad kuu ogolaanaya inaad si ay u soo bixi boqolaal barnaamijyadooda kale.
Bareesada chrome ku tuuray dekedda HDMI ee dhinaca of your computer shakhsiga ah iyo raac tilmaamaha Mudanayaasha in lagu soo bandhigi doonaa shaashadda ah.
Hubi in aad Chromecast iyo PC yihiin shabakad isku Wi-Fi, taas oo awood u siin doona in ay ka shaqeeyaan Chromecast
Fur taageeray Chromecast app ah in aad soo bixi dukaanka ruwaayado iyo tubbada button kabka si caadi ah ugu xaq u sareeya ama geeska bidix ee app
Ku raaxayso Waxaa
4. taageerayaan qalabka Android
Waxaa jira tiro balaadhan oo ah qalabka waxaa taageera Chromecast, qalabka waxaa ka mid ah:
2. Samsung Fiiro Edge
4. Samsung Galaxy Fiiro 3+
5. HTC Mid ka mid ah M7 +
5. Features ridaya Advanced
Chromecast uu leeyahay muuqaalada ka hor qaar ka mid ah in user kasta waa hubaal ogaado iyo sida loo isticmaalo sida:
• Chromecast waxaa loo isticmaali karaa xubnaha qoyskaaga ka mid ah asxaabta, iyaga oo aan helitaanka shabakadda wifi aad. Sidaas ma aad yeelan doonaan in ay ka welwelina jabsaday aad network Wi-Fi marka qof uu isticmaalayo Chromecast.
• Chromecast sababtana fasiraad aan macruufka Qalabka telefoonada gacanta iyo kiniiniyada - Dad badan oo dadka ka heli habkaani gacanta aad tan iyo markii ay leeyihiin aaladaha macruufka. Looma baahna in la walwalo sida qalabka si buuxda u la jaanqaadaan Chromecast.
• Waxaad si TV ka laptop ama qalab mobile saari karaa website-ka - Astaamaha sareeya ee Chromecast u ogolaanaya shubay fudud ee shabakadaha si aad laptop ama xataa television ka qalab mobile.
> Resource > Emulator > Sida loo Mirror Your Android Screen in PC la Chromecast